Realme 5 bụ onye na -ere ahịa kacha mma na India | Androidsis
Realme 5 na 5 Pro bụ ekwentị etiti etiti ọhụrụ site na ika China, nke anyị kwurịtara banyere ya. Modelsdị abụọ akpọrọ ka ha nwee ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa maka ụlọ ọrụ ahụ, nke a na -eme. Ebe ọ bụ na ekpughere data ahịa nke ụdị abụọ ahụ na India, nke na -eme ka o doo anya na ahịa a ejiri aka mepere emepe nabata ha.
A malitelarị ụdịdị abụọ a n'India. Ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ na India onye ekpughere ọnụ ahịa ndị Realme 5 na 5 Pro ndị a n'izu mbụ ya na mba ahụ. Ọnụ ọgụgụ nke na -egosi na enwere ndị na -azụ ahịa ịnụ ọkụ n'obi.
N'ihe banyere Realme 5, ọ bụ n'ahịa mbụ ya ka ha nọrọ ree mkpokọta ekwentị 120.000 n'India. Ọnụ ọgụgụ dị mma, nke ọbụna ihe nlereanya kachasị elu karịrị. Ebe ọ bụ n'ihe banyere 5 Pro, ire ahịa ya karịrị nkeji 130.000 na India.
Na mgbakwunye, ụdị abụọ ahụ nwere ezigbo ọkwa na Flipkart, nke bụ ụlọ ahịa ịntanetị kachasị mkpa na India. Nke a bụ ihe nwere ike ịre ahịa gị nke ọma n'izu, ma ọ bụrụ na ịhụ na ha nwere nkwado nke ndị na-azụ ahịa dịka ezigbo nhọrọ n'etiti etiti.
Ndị na -azụ ihe ndị a Realme 5 na 5 Pro nwekwara ohere ịnweta gam akporo 10, otú ụlọ ọrụ ahụ si nyere aka, n'afọ ọzọ ha ga -enwe ike ịnwe ụdị sistemụ arụmọrụ ọhụrụ n'ime ha. Ihe ọzọ kpatara ọtụtụ ji azụta otu n'ime ụdị abụọ a n'etiti.
Anyị amaghị ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmatụ ịmalite Realme 5 na 5 Pro na Spain. Ha bụ nhọrọ dị mma na ngalaba ahịa a ma ụlọ ọrụ ahụ emeela ka atụmatụ ya pụta ìhè ịmalite ekwentị ndị ọzọ na Spain. Yabụ na anyị nwere olile anya ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara nke a n'oge na -adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme 5 bụ bestseller na India